कम्युन होटेल : नेवा लहना
कृष्णराज सर्वहारी शुक्रवार, मंसिर १५, २०७४ 910 पटक पढिएको
एक घरले अर्कोलाई नछेक्ने । तह तह मिलेर बनेको उपत्यकाको एक सुन्दर सहर कीर्तिपुर । ऐतिहासिक विरासतसमेत बोकेको कीर्तिपुरले दार्जिलिङ सहरलाई सम्झाउँछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पस यहाँ स्थापना हुनुले विद्याको खानीका रूपमा पनि लिइन्छ यो सहरलाई । पृथ्वीनारायण शाहलाई कडा टक्कर दिने सहरको चिनारी पनि बोकेको छ कीर्तिपुरले ।
यसरी कीर्तिपुरलाई विभिन्न कोणबाट पारिभाषित गर्न सकिन्छ । कीर्तिपुर, थाम्बहाल टोलका बासिन्दा भने आफ्नो टोलको परिचय फेर्ने अभियानमा छन् । यस टोलमा तीन सय २७ जनाको परिवार छ, जसका एक सय ९० सदस्य रोजगारमा छन् । यही टोलका ७१ जना त कम्युनको रूपमा संयुक्त रूपमा चलाइएको नेवा लहना रेस्टुरेन्टमा कार्यरत छन् । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ११ सय डलर छ । तर यो टोलका सदस्यको प्रतिव्यक्ति आय औसत दुई हजार सात सय डलर पुगेको छ । टोलका अगुवा राजमान महर्जन ‘मानव’ भन्छन्, ‘थाम्बहाल टोललाई आम्दानीको दृष्टिले युरोपको स्टेन्डरमा पुर्‍याउने योजना छ ।’
कीर्तिपुरमा महर्जनहरूको बाक्लो बस्ती छ । उनीहरूको परम्परागत पेसा खेतीपाती हो । धान रोप्ने, काट्ने बेला अझै पर्म प्रथा छ यहाँ । पर्मकै बेला एक दिन एक हूल युवाले यहाँका अगुवा राजमान महर्जनलाई घेर्दै भनेछन्, ‘दाज्यू यो खेतीपातीले मात्रै पार लाएन । पैसा कमाउने केही उपाय बताउनु पर्‍यो ।’
राजमानले कीर्तिपुरको बजारलाई नजिकबाट नियालिरहेका थिए । उपत्यका बाहिरका बासिन्दा यहाँ आएर व्यापारमा जमिरहका थिए । तर, यहीँका रैथाने या खाडी मुलुक या खेतीपातीमा या त घर भाडामा लाएर सानो आम्दानीमै मक्ख थिए । उनले युवाहरूलाई भने, ‘मेरो कुरा मान्छौ भने मसँग एउटा गज्जबको आइडिया छ ।’
उनले आइडिया बताए । ‘नेवारी खाजा सेट बेच्ने । टोलका एक घरका एकजनाले कम्तीमा पाँच हजार रुपैयाँ जम्मा गर्ने र संयुक्त रूपमा रेस्टुरेन्ट चलाउने ।’ यही आइडियाले अहिले चलेको छ नेवा लहना रेस्टुरेन्ट । यसलाई उनीहरूले नेवारी संग्रहालय नाम दिएका छन् । खानेकुरामा हाल्ने मसला उनीहरू किन्दैनन् ।
आफ्नै ढिकी, खलमा कुट्छन् । प्रशासनको इजजात लिएर आफ्नो रेस्टुरेन्टको प्रयोगको लागि मात्र लोकल रक्सी र छ्याङ तयार पार्छन् ।सुकुलमा पलेँटी कसेर कीर्तिपुर दक्षिण भेगको नगाउँ बाहिरको दृश्यावलोकन गर्दै खाजा खानुको बेग्लै मजा रहेको भैंसेपाटीका विक्रम शेरचनले बताए ।
लहना भनेको सभ्यता हो । २२ भदौ २०६३ मा खोलिएको नेवा लहना रेस्टुरेन्ट स्थापना कालको ११ वर्ष पार गरी १२ वर्ष लागेको छ । एकताका रोल्पा, रुकुमतिर कम्युन अभ्यासमा थियो । तर, समयान्तरमा त्यो असफल भयो । कीर्तिपुर थाम्बहाल पुग्दा नयाँ शैलीमा कम्युन अभ्यास जीवित रहेको आभास हुन्छ । छोराछोरी काममा व्यस्त हुन्छन् । वृद्धवृद्धा आफैं खाना पकाएर खान सक्दैनन् । तर, यस टोलमा कुनै वृद्धवृद्धाले छोराछोरीको आगमन कुरेर भोकै बस्नु पर्दैन ।
नेपाल संवत् ११३८ बाट रेस्टुरेन्ट सञ्चालकहरूकै पहलमा ‘वृद्ध सेवा केन्द्र’ खोलिएको छ । यहाँ पारिलो घाम ताप्दै लहरै बसेर वृद्धावृद्धाहरू निःशुल्क खाजा खान्छन् । उबेलाका कुरा गर्दै गफिन्छन्।अहिले नेवा लहनाले वार्षिक नौ करोड रुपियाँको कारोबार गर्छ । उनीहरू पैसा मात्रै कमाइरहेका छैनन् । समाजसेवामा पनि सक्रिय छन् । यही समूहले आफ्नो टोल मात्रै होइन, बेलाबेलामा पूरै कीर्तिपुर नै सरसफाइ गर्ने गरेको छ ।
नेवा संग्रहालय नाम दिइएको रेस्टुरेन्टको एक शाखामा ५० प्रतिशत ग्राहक विदेशी हुन्छन् । आफ्नै घरको भान्सामा बसेझैं आफ्नैअगाडि तयार भएका पकवान खान पाउनु यहाँको विशेषता हो । बेलायती पर्यटक जेम्सले भने, ‘यो रेस्टुरेन्टको बारेमा साथीबाट थाहा पाएँ । यहाँ आउँदा धेरै रमाइलो लाग्यो ।’
लहना भनेको सभ्यता हो । कीर्तिपुरको नेवा लहना रेस्टुरेन्ट स्थापना कालको ११ वर्ष पार गरी १२ वर्षमा पाइला टेकेको छ । रोल्पा, रुकुममा कम्युन अभ्यास असफल भए पनि कीर्तिपुर थाम्बहाल पुग्दा भने कम्युन अभ्यास जीवित भएको आभास हुन्छ । यस टोलका कुनै वृद्धवृद्धाले घरमा खाजा कुर्नु पर्दैन । लहनाले निःशुल्क ख्वाउँछ ।
रेस्टुरेन्टकी कञ्चन महर्जन विदेशी पाहुनालाई आफ्नो समुदायको परिकार खुवाउन पाउँदा खुसी लागेको बताउँछिन् । क्यासियर यमुना महर्जनले विदेशी र नेपालीलाई खानाको एउटै सेट भएको जनाइन् । यद्यपि कीर्तिपुरका आमहोटलका नेवारी खाजाभन्दा यहाँ थोरै महँगो छ । नेवारी परिकारको सम्पूर्ण खाजा सेट पाइने भए पनि ग्राहक थरीथरी आउने हुँदा अब चाइनिज, इन्डियन, कन्टिनेन्टल खाना पनि थप्दै जाने उनीहरूको योजना छ ।
नेवारी परिकार प्रायः पिरो हुन्छ । क्यासियर महर्जनका अनुसार ग्राहकको अर्डरअनुसार पिरो, मसलाको मात्रा पनि कम गरिन्छ । विदेशी ग्राहकले प्रायः टिप्स पनि दिने गरेका छन् । कर्मचारी मनिता गोपाली भन्छिन्, ‘म्हपूजाका दिन सबै कर्मचारीले बराबर भाग लगाएर टिप्स बाँड्छौं ।’ अहिले थाम्बहाल टोलका ७१ र अन्य टोलका ११ जना गरी ८२ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । तिनको तलबका लागि मात्रै मासिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ ।
रेस्टुरेन्टसँगै नेवा लहनाका सञ्चालकले अन्य व्यवसाय पनि बढाउन थालेका छन् । आफैंलाई धेरै चाहिने भएपछि ग्यासको डिपो नै खोलिएको छ, जहाँबाट अन्यले पनि ग्यास सिलिन्डर किन्न सक्छन् । बेकरी बनाउनेदेखि सिलाइ कटाइ पनि खोलिएको छ । प्लास्टिकलाई विस्थापित गर्न सस्तो खालको कपडाको झोला यहाँबाट उत्पादन हुने गरेको छ । सञ्चालक राजमान महर्जन रेस्टुरेन्ट हातामै खोलिएको किराना पसल नेपालकै सबैभन्दा सस्तो भएको दाबी गर्छन् ।
कीर्तिपुरको बाघभैरब मन्दिर परिसरबाट दुई सय मिटर पश्चिमपट्टि छ, नेवा लहना रेस्टुरेन्ट । मन्दिरको दर्शन गर्दै काठमाडौं उपत्यकाको दृश्यावलोकनपछि प्रायः सपरिवार लहनाको परिकार चाख्न पुग्छन् । छोराछोरी र श्रीमतीसहित रेस्टुरेन्टमा आएका स्थानीय माइला महर्जन भन्छन्, ‘यहाँ आइयो भने आफ्नै घरमा खाएजस्तो लाग्छ ।’
नेवा लहनामार्फत सिंगो कीर्तिपुरलाई उपत्यकाको फुड प्वाइन्ट बनाउन चाहन्छन् सञ्चालक राजमान । तिनको समूहले गरेको एक सर्भेअनुसार २०६७ साल अघिसम्म औसत ६ सय उपत्यका बाहिरका ग्राहक कीर्तिपुरका विभिन्न रेस्टुरेन्ट आउँथे । २०७४ सालमा आइपुग्दा बाहिरका ग्राहक संख्या औसत १८ सय पुगेको छ । राजमानका अनुसार कीर्तिपुर बाहिरका ग्राहकलाई तान्न सक्नुमा लहना ब्रान्डको पनि योगदान छ ।
उनी त आफ्नो टोलको प्रत्येक घरमा होमस्टेझैं रेस्टुरेन्ट होस् भन्ने चाहन्छन् । केहीले क्षमताअनुसार आफ्नो घरमा सुरु पनि गरिसके । पहिले थाम्बहाल टोलका मात्रै ३९ जना खाडी मुलुकमा थिए । अहिले खाडी मुलुकमा यस टोलका दुईजना मात्रै छन् । युवालाई स्वेदेशमै विभिन्न काममा संलग्न गराएर मुलुककै धनी टोल बनाउन उद्यत छन् महर्जन ।
रेस्टुरेन्टको आम्दानीको मासिक दुई लाख रुपियाँ थाम्बहाल टोलको पुनःनिर्माण, सरसफाइ, बाटोघाटो आदिमा खर्च गर्ने गरिएको छ । यसमा संलग्न परिवारहरूको पानी, बत्तीको बिल पनि यसै समूहबाट तिरिन्छ । कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर रमेश महर्जन पनि यसै थाम्बहाल टोलकै हुन् । भन्छन्, ‘यहाँका युवाको सिको देशका अन्य टोलका युवाले पनि गर्न सके नेपाल समृद्ध हुन बेर लाग्दैन ।’
१२ मंसिरमा कीर्तिपुर सहरमा ‘सातगाउँले’ जात्रा लाग्दैछ । यही जात्राको अवलोकनको अवसरमा नेवाः सभ्यताको नयाँ कम्युन हेर्न तपाईं पनि एकपटक नेवाः लहना पुग्ने कि ?
मुस्ताङका सांसदको प्राथमिकतामा कोरला नाका 553
जनभावनामाथि खेलवाड 846
वडाअध्यक्षले नै लगाए अधिकृतको कार्यकक्षमा ताला 79
उद्योगको पर्खालले किच्दा एक मजदुरको मृत्यु, तीन घाइते 91
नक्कली प्रमाणपत्र बनाउने गिरोह पक्राउ 847
मार्न तयार पारिएका रुखलाई यसरी बचाइयो (फोटोकथा) 3845
फोनकल प्रतिमिनेट ३०१ रुपैयाँ ! 11785